CLEMATIS, SAWIRO IYO SHARAXAADDA NOOCYO - SOOSAARKA DALAGGA
Clematis wuxuu awood u leeyahay in uu la yaabo oo jilicsanaado qof kasta oo leh cagaaran casiir leh, ubaxyada quruxda badan, qaabab kala duwan, midabka aan caadiga ahayn, urta jilicsan. Qofka degan hoosta ayaa si wacan uula qabsada Yurub wuxuuna leeyahay in ka badan 300 nooc. Ubax mucjiso ah, sida cawska, qurxin cawskaaga, xardho geela leh geed canab ah ama geed si ay ugu koraan balakoonka. Clematis ayaa ku farxi doona ubaxiisa 3-4 bilood.
Ma taqaanaa? Giriigyada qadiimiga ah ayaa loogu yeeraa dhir fuushan - "Clem." Waa ereygan oo ah in magaca clematis uu yimaado. Waxaa ka mid ah magacyo caan ah loo yaqaan - wartog, clematis, curlaha awoowe, iwm
Clematis, sharaxaad of ubaxyo
Clematis waa caan - noocyo kala duwan oo clematis leh sawirada iyo sharaxaada waxaa laga heli karaa goobo khaas ah iyo suugaanta dhaqanka. Xayawaanka dilka ah ee qoyska ee burcadka waxaa lagu soo bandhigaa noocyo kala duwan oo nolosha ah (cawska caleemaha 30-40 cm sare, geedo iyo geedo yar yar (illaa 140 cm), caleen-caleen (illaa 10 m). Noocyo kala duwan, caleemuhu waa kuwo fudud oo adag, oo leh khafiif ah oo khafiif ah, pinnate iyo trifoliate iyo laba jeer cagaaran, cagaar iyo guduud. Nidaamka asaasiga ah ayaa la sameeyaa: waxa uu samayn karaa "gadhadh" dhab ah - 5 kg oo miisaankiisu yahay iyo 1.5 m dhexroor, wuxuu noqon karaa hal-ul. Caleemaha waxay leeyihiin ur aan caadi aheyn.
Waa muhiim! Clematis waa mid aad u nugul dabaysha - caleemaha way jabeen oo qallajiyeen, ubaxyada ayaa waxyeelloobay.
Soo jiidashada ugu weyn ee dhirta waa ubaxyo iyo burooyinkeeda! Cabbirta ubaxa waxay ku kala duwan tahay 4 ilaa 25 cm, palette midabkiisu waa ballaaran - waxay leedahay daraasado siyaalo kala duwan (laga bilaabo cad-buluug ilaa buluug madow, laga bilaabo pinkish ilaa guduud-casaan, iwm.). Midab gaar ah wuxuu siinayaa ubaxa "caarada" - boodhka istiraatiijiga ah iyo pistes ee koray xarunta. Waqtiga ubaxu waa 3-4 bilood, hal caleemo nool ayaa laga soo bilaabo 10 ilaa 21 maalmood.
Warshad waa mid fudud-u baahan oo u baahan waraabin badan. Bilaha jiilaalka ee loo baahan yahay hoy.
Waa muhiim! Clematis ayaa ka muuqda beeraha Europe ee qarnigii 16aad. - 1548-kii, Clematis Vineyard waxaa lagu sharaxay khabiirkii Ingiriisiga W. Turner. Noocyada ugu horreeya ee baraf u-caabbin ah ayaa la jarjaray bartamihii qarnigii 20aad.
Qeybinta waxay ku xiran tahay meesha dhismaha ubaxa
Ma jiro nidaam caalami ah oo caalami ah oo loogu talagalay clematis. Waxaa jira nidaamyo dhowr ah, oo ku saleysan hal ama calaamad kale.
Goobta abuurka ubaxa waa muqaal-dhigid muhiim ah. Sida laga soo xigtay, waxaa jira saddex kooxood oo clematis ah, oo leh ubax:
sanadkii la soo dhaafay iyo caleemo cusub;
on caleemo sannadkii hore;
on caleemaha cusub.
Ubax on caleemaha labadii hore iyo hadda
Qayb ka mid ah clematis Blooms laba jeer: guga dabayaaqadii - xagaaga hore (caleemaha sannadkii hore), iyo laga bilaabo bartamihii xagaaga ilaa September (on caleemaha cusub). Muddooyinka ubaxa ee clematis kala duwanaayeen. Clematis ugu horeeya waa inay noqdaan laba jeer - ka dib markii ubax ugu horeysay ee xagaaga iyo dayrta (gaaban ubaxyada ubax).
Qaybtan waxaa ka mid ah kooxaha:
Clematis Woolly (oo loo yaqaan 'Scotland' qarnigii 19aad, wuxuu leeyahay laba-geesood, wuxuu gaaraa 2,5 m. Geedka (10-20 cm dhexroor) midab cad ama midab leh. Iyadoo saldhigeedu yahay, kala duwan Madame le Cultre, oo ah hybrid of Seboldia, Lavsonian, iyo kuwo kale, ayaa la siiyay; Bloomkii koowaad waa gaaban, ubaxyo yar, laakiin waxay yihiin kuwo waaweyn. Bloom labaad waa dheer iyo ka sii badan, laakiin ubax yar yar.
Patent ama Clementis Spread (gaarey 3.5 m, ubaxyo waaweyn oo waaweyn (15 cm) oo ah caddaan, buluug, buluug, iyo noocyo kala duwan). Noocyo badan - oo leh ubax laba.
Waa muhiim! Si aad u kordhiso muddada ubax, waxaad isticmaali kartaa habka lagu maamulayo manjooyin - gaabin caleemo dhowr ah oo ah labada noodood ee xagaaga hore.
Ubax ee caleemaha ee sanadka hadda
Noocyada clematis inta badan foomka inflorescences caleemaha cusub laga bilaabo July ilaa September (ugu sarraysa ee ubax dhacaya August). Kooxahan waxaa ka mid ah:
Jacmanne (oo loo yaqaan 'white') (midabka cad) waxaa ka mid ah Rouge Cardinal, Star of India, Bella, iwm.
Vititsella (dhererka 4-6 m, ubaxyada yar yar (3-5 cm) ubax (illaa 100 isla waqti isku mid ah) midabyo kala duwan (buluug, midab, dhar guduudan) Waxaa ka mid ah noocyada caanka ah ee Ville de Lyon, Viola, Rugta Booland iyo kuwo kale.
Integrifolia ama clematis caleen (leh cirridka afkoda, dhererka - 1.5 m, ubaxa - dawanno buluug, casaan, casaan iyo midabyo kale). Noocyada ugu caansan waa Durand, Värava, Xusuusta Wadnaha, iwm.
Ma taqaanaa? Si aad u ogaato kooxda clematis aad ka iibsatay iska leh, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyaa caleemaha dayrta - mid gebi ahaan, kuwa kale wax yar (10-15 knots). Xilliga cusub waxaad arki doontaa caleemaha caleemaha soo muuqan doona.
Ubax on caleemaha sannadkii la soo dhaafay
Kuwaas waxaa ka mid ah clematis leh ubax on caleemaha sannadkii hore. Dhirta noocan oo kale ah waxay ku haboon yihiin koritaanka weelasha. Kuwani waa noocyada ugu muhiimsan ee kooxda Atragen (badanaa loo yaqaan 'princesses'):
Alpina (ilaa 3 m dhererka dhirta, ubaxyo leh casaan ballaadhan oo casaan ah, caddaan ah, ubax kareem ah). Noocyada caanka ah Artagen Franky, Albina Plena, Pamela Jackman iyo kuwo kale.
Florida (hindhiso ilaa 3 m, ubaxyo qurux badan, oo jecel carrada qoyan). Noocyada caanka ah - Gawaarida Vivian, Baby, Jeanne d'Arc.
Mountain Clematis (Liana weyn (illaa 9 m), oo leh dhar guduudan. Ubax (ubaxyada 2 ilaa 5 wiqiyadood) waxay leeyihiin midab cad iyo casaan). Fasalada - Rubens, Montana Grandifora iyo kuwo kale.
Ma taqaanaa? Dhammaan noocyada clematis waa dhirta malab wanaagsan.
Noocyo, xoortay geedaha iyo geedaha dwarfka
Qormo kale oo loo yaqaan 'clematis' waa nooca clematis u egyahay, waa maxay xajmiga qallafsanaanta. Sidaa awgeed, foomamka cagaarka ah, geedaha iyo geedaha yar-yar ayaa la kala saaraa.
Clematis ee kooxdani waa kuwo aan qabin, adkaysi uuna u baahnayn daryeel gaar ah. Clematis Straight ayaa ka mid ah clematis cagaarsho: dhererka - laga bilaabo 1 illaa 1.2 m, u eg midabka caanka ah: ubax xiddig leh 4 dabaq ah. Ugu sarraysa ubax ah June - July. Waa noocyada ugu quruxda badan ee clematis.
Cawska Clematis kala saar caleemaha lignified. A wakiil caadi ah ee kooxdan waa clematis caleen dhan: laga bilaabo 60 cm ilaa 1 m., Iyadoo ubax laamood-qaabeeya (tufaax yihiin dibedda dibadda). Taageeradu waa lagama maarmaanka u ah ubaxa - afkoda waa dhuuban yihiin.
Tilmaamidda clematis ee kooxdan waa in qaybta hoose ee dhirta (perennial) waa adag, qaybta sare u dhintaan sanadkiiba. Noocyada ugu waaweyn:
Clematis Texas (oo ku haboon beer yar) - illaa 40 cm, ubaxa waxay u eg yihiin tulipsaha yar yar);
Clematis Tangut (laga bilaabo 30 cm illaa 2 m, waxay qaabisaa lakabka dufan ee cufan, ubax midabo dahabi ah oo jaale ah);
Clematis Borschovikolistny (0.5-1.5 m dheer, ubax buluug ah u eg jilbjire).
Sida loo kala saaro clematis by size size ubax
Ubaxa waa jawaabta su'aasha ah sababta liana clematis waa mid caan ah. Iyada oo ku xiran cabbirka dhexroorka ubaxa ee clematis qoynta weyn-ubax (laga bilaabo 5 cm iyo ka badan) iyo yar-ubax (ilaa 5 cm).
Clematis krupnotsvetkovy kala duwan yihiin ubaxyo badan oo qurux badan. Waxaa ka mid ah dhirta ballaaran-ubax waxaa jira daraasiin kala duwan oo ka yimid Zhakman, Langugings, Vititella, Patent, Kooxaha Integrifolia, iwm.
Ubaxyo yaryar waxay leeyihiin ubax badan, foomamka xarrago leh. Waxaa lagu beeray miraha. Kuwani waxaa ka mid ah noocyo badan oo kooxo ah: Atragen, Flamulla, Tangutik, Vitalba, Clematis Talyaani.
Qeybta Clematis midabka
Qeybaha clematis ee ubaxyada ay ka mid yihiin: midab buluug, casaan, caddaan, iwm, ayaa ah mid caan ku ah, laga yaabee tani maaha hab farsamo, laakiin marka ay timaado qurxinta beerta ama warbaabka, su'aasha midabku waxay u socotaa horey.
Waa muhiim! Ubaxyada noocyada kala duwan iyo noocyo waxay yeelan karaan midabyo kala duwan.
In kasta oo xaqiiqda ah in bannaanka u sanadihii la soo dhaafay ay soo saareen noocyo badan oo cusub, ubaxyada clematis ee saafi (iyada oo aan qarsoon ee hooska) ee buluuga ah ayaa dhif ah helay.
Durandi (noocyada kala duwan ee 1870. Waxay koraa ilaa 2 m, ubax (7 ilaa 14 cm) waxay leeyihiin midab khaas ah oo indigo ah.
Multi Blue (noocyada kala duwan waxaa laga soo qoday Holland sanadkii 1983, dhererka - 2-3 m Terry Terry waa weyn oo midab madow ah.
Iftiinka buluuga ah (sidoo kale waxaa la siiyay Holland 1998. Ubaxyo buluug leh xididdada buluugga ah).
Kiri Te Kanawa (oo la soo geliyey England 1986-kii. Ubaxyada Terry waxay leeyihiin midab buluug-buluug).
Midabka cad ee clematis waxaa matalaya koox weyn oo ubaxyo Terry ka sarreeya oo dhan:
Joan of Arc (dhererka illaa 3 m, ubax yar-yar, si sahlan u dulqaadka dhaxan, abaarta, hooska).
Queen Arctic (dhererka 2.5 m, ubaxa - 18 cm, wuxuu jecel yahay qorraxda, wuxuu ka cabsadaa dabaysha, wuxuu kala jajabay labo jeer - bishii Juunkii sanadihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay iyo bishii Agoosto ee hadda).
Alba Plena (ubax laba jibbaaran ayaa lagu kala duwan yahay midab cad oo cad).
Bella (dhererka - 2 m, ubaxyada asterisk Bloom ee July - September (bilowga hore ubax waxay leeyihiin jilicsan huruud ah, ka dibna waxay noqdaan caddaan cad).
Meelaha huruudka ah waxaa ka muuqda midabyo saafi ah iyo midabyo - cagaaran-jaalle ah, cad cad-jaale ah:
Clematis noocyo yar yar-ubax leh Tangutik (blooms si qumman ubaxyo dhalaalaya oo yar yar).
Shrub f. Dheecaan (illaa 1 m tallaabo, ubaxyada laga bilaabo Agoosto ilaa Sebtembar, ubax waa dahab dahab ah (4 cm).
Pilatocete (ilaa 3 m, midabka laga bilaabo Luulyo ilaa Agoosto leh ubax cagaaran-cagaaran (4 cm)).
Midabada jilicsan ee casaanka ah waa kuwo yar. Caadi ahaan waa lakac, lulac, guduud ama guduud.
Trifium Grandiflora (dhererka 5aad, caleemaha waxaa lagu qurxiyey ubaxyo casaan ah oo saddex-jaale ah (4-5 cm). Ubax - May-Juun).
Kaiser F (noocyada kala duwan ayaa laga soo raray Japan sannadkii 1997 (dhererka 1.5 m, ubaxyada leh ubaxyo casaan badan oo labajibbaaran oo ah Juun-Julaay).
Asao (oo caan ku ah Japan, waxay labanlaabeysaa laba jeer (bishii Juun iyo dhammaadkii Agoosto), qorraxdu ma jecla. Ubaxyada (12-20 cm) waa labanlaab, casaan mugdi ah.
Madame Baron Vilar (dhererka 3.5 m, ubaxa - casaan leh miro guduud ah, waa la beeray dhammaadkii Agoosto).
Kooxaha Clematis Red ayaa lagu kala saaraa tignoolooyinka qani ah:
Rouge Cardinal (bred in Poland, dhererka - 2-3 m, ubaxyada si fiican leh ubax cas (1-20 cm) laga bilaabo June ilaa August.
Ruytel (dhererkoodu wuxuu yahay 1.8-2 m, oo ubaxyo leh ubaxyo casaan ah oo casaan ah laga bilaabo July illaa November).
Westerplatte (oo laga qodo Poland, ubax weyn (10-16 cm) - maroon-guduud, ubaxyada Juun-Agoosto).
Ma taqaanaa? Clematis Armand iyo David ur xun, clematis toosan - caleenta, clematis paniculata - jasmine.
Xaqiiqda iyo qiyamka ku saabsan orchid buluuga ah ee Phalaenopsis: sheekada muuqaalka iyo talooyin ku saabsan mawduuca
Ku dhajinta baaskiilada: digriiga iyo miraha. Sidee iyo goorma ayaad u baahan tahay inaad beerto geed?
Daadi Kanadian "Konika"
Rootiiga Rouen ee shimbiraha waa mid ka mid ah kuwa aan yareynin by taranta, laakiin ahaa guri ku. Cunto waxay loola jeedaa jihada hilibka, iyo hilibka ee ducks kuwaas oo aad u qadarin dhadhan fiican. Si kastaba ha noqotee, guriga, shimbirahaasi waa ay yaryihiin sababo la xiriira daryeel xumo. Inta badan waxaa loo hayaa ujeedo qurxin, halkii hilibka. Read More
Sida loo iibsado lo'da
Marka hore u dhigma - Geedka dhirta Prima